international short news Archives - News @ M-Media
M-Media တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ဘလတ္တာကို ရုရှားက ထောက်ခံနေဆဲ ……………………………… ဖီဖာဥက္ကဌ ဘလတ္တာအား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဆွစ်ဇ် တရားသူကြီးချုပ်က ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် ဘလတ္တာအား ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည်ဟု ရုရှား[Read More…]
September 28, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅)
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ M-Media တူရကီတွင် ဒုက္ခသည်လှေတစ်စီး နစ်မြုပ်မှုကြောင့် လူ ၁၇ ဦး သေဆုံး ………………………………. ဒုက္ခသည်များ တင်ဆောင်ကာ တူရကီမှ ဂရိနိုင်ငံ ကို့စ်ကျွန်းသို့ ခုတ်မောင်းသွားသည့် စက်လှေတစ်စီးမှာ တူရကီရှိ[Read More…]
September 27, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ M-Media သီရိလင်္ကာ မြေပြိုမှု လူ ၇ ဦးသေဆုံး …………………. သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မြို့တော်ကိုလံဘိုတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မြေပြိုမှုကြောင့် ၂ နှစ်သားကလေးငယ် အပါအ၀င် အနည်းဆုံး လူ[Read More…]
September 26, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ M-Media အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ဒုက္ခသည်မျာကို ယူကရိန်း လက်ခံမည် …………………………….. အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကမှ ဒုက္ခသည်များ ဥရောပသို့ ၀င်ရောက်လာမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် မိမိတို့က ကူညီသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဒုက္ခသည်များအား တိုင်းပြည်၌ လက်ခံသွားမည်ဟု[Read More…]
September 25, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ M-Media ဂရိဝန်ကြီးချုပ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို …………………….. နိုင်ငံ၏ အကြွေးပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြန်လည် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဂရိဝန်ကြီးချုပ် အလက်ဇစ်[Read More…]
September 23, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း